Yuweri Musaveni oo heshiis dhexdhigay Sheekh Shariif & Mwai Kibaki – SBC
Yuweri Musaveni oo heshiis dhexdhigay Sheekh Shariif & Mwai Kibaki
Madaxweynaha wadanka Ugandha Yuweri Musaveni ayaa dhexdhexaadin uu ka dhexsameeyey Madaxweyneyaasha Kenya & Soomaaliya Mwai Kibaki & Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaa la sheegay in lagu gaarey isfaham ku aadan mad madowga labada hogaamiye ee ka dhashey duulaanka Kenya ay ku soo gashay gudaha Soomaaliya ee ay ku sheegtey in ay kula dagaalamayso Al-Shabaab.
Kulan sadexda nin ku dhexmarey guriga madaxtooyada magaalada Nairobi ee caasimada Kenya ayaa la sheegay in Kenya ay aqbashay shuruudo uu soo jeediyey Sheekh Shariif oo ahaa in aayaha gobolada Jubooyinka lagala tashado dawlada KMG Soomaaliya, isla markaana meesha laga saaro tuhunka uu ka qabo xiriirka Kenya & maamulka Azaaniya ee uu hogaamiyo Prof. Gaandi oo qayb ka ah gulufka taageeraya hawlgalka Kenya.
Ilo wareed oo dhanka diblumaasiyada ayaa sheegaya in sababaha Madaxweyne Sheekh Shariif uu uga biyo diidsanaa hawlgalka Kenya ay ugu weyn tahay shakiga ku lamaansan aayo ka talinta gobolada Jubooyinka isagoo aaminsanaa in gobolkaasi uu ku dambeyn doono xoogan ka biyo diidsan dawlada KMG Soomaaliya.
Warar aan si buuxda shaaca looga qaadin ayaa sheegaya in xitaa madaxweynaha Kenya Musaveni uu qabey shaki ku gadaaman hawlgalka Kenya, balse muujiyey in uu taageerayo hawlgalka Kenya, waxaana wararku xusayaan in isaga iyo Sheekh Shariif ay qabaan fikir isku dhaw oo ku aadan xaalada hawlgalka Kenya.
Qodobada heshiiska sadexda madaxweyne ayaa waxaa ka mid ah in Kenya shaarka AMISOM u galiso ciidamadeeda ka hawlgalka gudaha Soomaaliya isla markaana ciidamo tiradoodo dhan tahay 9 kun ay ku biiriso hawlgalka AMISOM ee midowga Afrika hoos taga, iyagoo qayb ka noqonaya hawlgal mideysan oo dhan ka ah Al-Shabaab.
Mwai Kibaki, Yoweri Museveni & Sheekh Shariif waxay ugu baaqeen wadamada Afrikaanka ee horey ugu yaboohay in ay ciidamo Soomaaliya u soo diri doonaan inay ka dhabeeyaan balanqaadkooda ayna xoojiyaan ciidamada AMISOM.
Diblumaasiyiinta faaqida arimaha bariga Afrika ayaa sheegay in heshiiska maanta ka soo baxay magaalada Nairobi uu meesha ka saarayo cabsi laga qabey in xaalada dagaal ee Soomaaliya ay isku badasho faragalin ay ku hardamaan wadamada gobolka si la mid ah Congo (Ex-Zair) halkaasi oo ay isku farasaareen ciidamada Rwanda & Ugandha oo kala taageeyey dhinacyada isku hay colaada Congo.
In meesha laga saaro tuhunkaasi waxaa ka hadley wasiirka arimaha dibada Ugandha Okello Oryem oo u sheegay wargeyska Daily Monitor ee ka soo baxa magaalada Kambala wuxuuna sheegay in wadashaqeynta sadexda wadan Somalia, Kenya & Ugandha in ay tahay mid looga fogaanayo arin la mid ah dhacdadii “Kisangani incident” (magaalo ku taal wadanka Congo), halkaasi oo ay ku dagaalameen ciidamada Ugandha & Rwanda, kuwaasi oo u tagey Congo iyagoo isbahaysi ah balse markii dambe iyagu isdagaalay.
“Waxaynu doonaynaa in ciidamada Kenya aysan la dagaalamin kuwa AMISOM si la mid ah wixii ka dhacay Kisangani, mana doonayo in shilkii Kisangani uu ka dhaco Soomaaliya” ayuu yiri Okello Oryem.
Arintan ayaa laga cabsi qabey in Ugandha ay ka muujiso diidmo ama raali la’aan hawlgalka Kenya, iyadoo go’aanka Sheekh Shariif ee diidmada hawlgalka Kenya uu ahaa mid si hoose uu ula qabey Madaxweynaha Ugandha sida ay sheegayaan ilo wareedyo ka gaabsadey in magacooda saxaafada laga sheego sababo xasasiyada warkani uu leeyahay.
Warmurtiyeed ka soo baxay gunaanadkii shirkaasi waxay ku sheegeen sadexda nin ujeedada ay u heshiiyeen ay tahay sidii loo jabin lahaa Al-Shabaab.
Wasiirka arimaha dibada Kenya Moses Wetangula oo isaguna ka hadlayey heshiiska Nairobi ayaa sheegay in la isku afgartey in ciidamada Kenya, AMISOM & kuwa dawlada KMG Soomaaliya ay wadajir u shaqeeyaan si loogu guuleysto jabinta Al-Shabaab.
c/qaadir maxamuud ducaale maxmed says:
waxaa dhammaan halka kasalaamayaa dhamaan umad islaamka ooberyahan danbe aysookala dhexgashay isfahmiwaa siyaasadeed sida wadama badan ooaykamid yihiin libiya somalai masar &kuwa kale oo aanan halka usookoobikarayn